जाडोमा छालाको बचाउ र के खाने ?::Online News Portal from State No. 4
जाडोमा छालाको बचाउ र के खाने ?
जाडो महिनामा मौसमको आद्र्रता कम हुने हुँदा छाला सुख्खा हुदै जान्छ, त्यसको फलस्वरुप हातखुट्टा फुट्न, ओठ फुट्ने छाला सुख्खा हुने कपाल सुक्खा भएर फुरुङ्ग देखिने हुन्छ । त्यतिमात्र होइन, जाडो महिना शरीरमा विभिन्न किसिमका एलर्जीहरु पनि देखा पर्छन् । उनीको लुगा लगाउने हुँदा एलर्जी भएर शरीर चिलाउने, पोल्ने हुन्छ । चाडोमा हातखुट्टा सुनिने समस्या पनि धेरै देखिन्छ, त्यसैले पनि हामीहरु धेरै घाममा बस्ने आगो ताप्ने हिटर ताप्ने गर्दा हाम्रो छाला सुख्खा हुँदै जान्छ ।
जाडोको घाम रापिलो हुने हुँदा छालामा भएको चिल्लोलाई सोचेर छालालाई सुख्खा बनाउँछ । घामले गर्दा अनुहारमा चायाँ बढ्नुको साथसाथै अनुहारमा चाउरीपन बढ्दै जान्छ । त्यसैले जाडोमा घाममा बस्दा वा घरबाहिर निस्कँदा सन्सक्रिममा बढी एसपिएफ भएको प्रयोग गर्नु पर्दछ । जाडोमा हामीले धेरै साबुन प्रयोग गर्नाले हाम्रो छाला सुख्खा हुदैँ जान्छ, त्यसैले जाडोमा साबुनको सकेसम्म कम प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ वा बच्चालाई प्रयोग गर्ने साबुन अथवा ग्लिसिरिन भएको साबुनको प्रयोग गर्न सक्छौँ ।
जाडोमा हामीले फेसवासको प्रयोग गर्दा पनि माइल्ड खालको फेसवासको प्रयोग गर्ने र तुरुन्तै मोस्चराइज क्रिमको प्रयोग गर्न सक्छौं, त्यसो गर्दा जाडोमा मोस्चराइज हराउन पाउँदैन ।
जाडो याममा हिटर ताप्ने, घाममा धेरै बस्दा शरीरमा पानीको मात्रा पनि कम हुने हुँदा प्रशस्त मात्रामा मनतातो पानी पिउनु पर्दछ । किनभने हातखुट्टा धेरै फुट्नुको कारण पनि शरीरमा पानीको मात्रा कम भएकाले हो । मोस्चराइजजिङ लोसनक्रिम जाडो र गर्मी महिनाको भिन्न हुन्छ । गर्मीमा प्रयोग गर्ने क्रिमले जाडोमा काम नगर्न पनि सक्छ । त्यसैले जाडोमा प्रयोग गर्ने मोस्चराइज लोसनको प्रयोग गर्नुपर्छ । किनभने जाडोमा प्रयोग गर्ने लोसनमा बढी मोस्चराइज वा चिल्लो खालको हुन्छ ।
हामीले जाडो महिनाामा धेरै ग्लिसिरिनको प्रयोग गर्ने गर्दछौँ । त्यो राम्रो पनि हो ग्लिसिरिनको प्रयोग गर्दा हामीले ग्लीसिरिन मात्रा प्रयोग गर्नुहुदैँन किनभने ग्लिसिरिनमा पानी सोस्नो शक्ति हुन्छ र ग्लिसिरिनको मात्र प्रयोग गर्नाले शरीरमा भएको चिल्लो पदार्थलाई सोचेर छाला झन् सुख्खा बनाउने गर्दछ, त्यसैले ग्लिसिरिन को प्रयोग गर्दा जहिले पनि एक चम्चा ग्लिसिरिन मा दुई चम्चा पानी वा रोज वटर वा कागती मिसायर प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुन्छ । जाडोमा खुट्टा फुटेर हैरान भइन्छ, त्यो बेलामा खुट्टा फुट्ने समस्या भएकाहरुले खुट्टालाई बनाएको क्रिम लगाउनुपर्छ । त्यसमा धेरै मोच्चराइज केमिकल हालेर बनाइएकोले फुटेको खुट्टा छिटो निको हुन मद्दत गर्छ ।
जाडोमा हामीले नुहाउँदा तातो पानीको प्रयोग गर्ने गर्दछौँ तर धेरै तातो पानीको प्रयोग गर्दा शरीर सुख्खा हुन्छ । जाडोमा नुहाँउदा जहिले पनि मनततो पानीले नुहाउने र नुहाउनासाथ अलिअलि पानी पुछेर मोस्चराइज लोसनको प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसो गर्नले शरीरको चिल्लो कम हुन पाउदैन । जाडोमा कपाल रुखो हुने हुँदा हप्ताको एकपटक तेल लगाउनु पर्दछ र छिटा–छिटो कपालमा स्याम्फु प्रयोग गर्नु हुँदैन, धेरै स्याम्फुको प्रयोगले कपाल रुखो हुन्छ । बच्चाहरुलाई जाडो महिनामा चिलाउने समस्या बढ्न सक्छ । त्यसैले राति सुत्नु अगाडि तेल लगाइ दिनुपर्छ बच्चालाई उनीको लुगाभित्र जहिले पनि सुतीको लुगा लगाइ दिनुपर्छ। त्यसो गर्दा चिलाउने समस्या कम हुन्छ ।
जाडोमा चिसोबाट बच्न यी चिज अवश्य खानुहोस्ः
१. सर्वोत्तम पीठो (अन्न तथा गेडागुडीको पीठो)ः विभिन्न किसिमका अन्नहरु जस्तै चामल, गहुँ, जौ मकै, कोदो, फापर, भट्मास, लगायतका विभिन्न अन्नहरुलाई एकै ठाउँमा मिलाएर त्यसको पिठो तथा रोटी तयार गरी खानाले शरीरलाई चाहिने धेरै खालका पोषक तत्वहरु म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, म्याग्नेज, ट्रिप्टोफेन, फाइबर, भिटामीन–बि, आण्टिआक्सीड आदि प्रसस्त मात्रामा प्राप्त हुन्छ । जसले स्वास्थ्य मजबूत बनाउँछ ।
२. हाडे बदामः
बदाम कयौं गुणले भरीपूर्ण हुन्छ । यसको नियमित सेवनले अनेक खालका रोगहरुबाट बचाउँछ । बदामको सेवनले स्मरण शक्ति पनि बढाउँछ । यसको सेवनले कब्जियतबाट पनि बचाउँछ । सबैभन्दा बढी यसले चिसोबाट बचाउँछ । यो हाडे बदाम खानाले सुगरका विरामीलाई समेत फाइदा दिन्छ । यसमा भिटामिन इ पाईन्छ ।
जानेर या नजानेरै मानिसहरू अदुवालाई विभिन्न रुपमा सेवन गर्छन् । कसैले चियामा हालेर खान्छन कसैले सुठो बनाएर अझै भनौ हामीले बिहान बेलुका खाने तरकारीमा त अनिवार्य नै राखने गरिन्छ । जे जसरी खाएपनि यसले शरीरलाई चाहिने पोषक तत्व प्रदान गरेकै हुन्छ । विशेष गरी जाडो मौसममा चिसोको कारणले रुघा खोकी लाग्दा यसको रस वा धुलोलाई तातोपानीमा पकाएर महसँग मिलाएर खानाले फाइदा हुन्छ ।
शरीरलाई स्वस्थ र निरोगी राख्न र फुर्तिलो बनाई राख्न सहयोग गर्छ । आयुर्वेदमा त महलाई अमृत नै मानिन्छ । त्यसो त मह जुनसुकै मौसममा पनि लाभदायक मानिन्छ । महले विशेष गरी शरीरमा तापक्रको वृद्धि गर्ने र पाचनशक्तिलाई बलियो बनाउने काम गर्छ ।
चिसोमा ओमेगा–३ चिल्लो एसिड सबैभन्दा राम्रो खाना हो । यो मुख्य रूपमा माछामा पाइन्छ । चिसो मौसममा माछा खानाले शरीरमा गर्मी पैदा हुन्छ । यसमा जिंकको मात्र प्रशस्त हुन्छ । यसले शरीरमा आन्तरिक शक्ति बढाउँछ र विभिन्न खालका चिसोका कारण हुने रोगहरु लाग्नबाट बचाउँछ ।
६.ज्यादा रसिला फल नखानुहोसः
ज्यादा रसिला वा गुलियो पदार्थको सेवन कम खाने । यस्ता चिजहरु जस्ले शरीरमा तापक्रमको सट्टा चिसोमात्र बढाउँछ । बरु अमिलो वर्गका फलफूलहरु सेवन गर्नु होस् । जसले चिसोसँग लड्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि गर्दछन् ।
१०० ग्राम बदाममा प्रोटीन २५.३ ग्राम, चिल्लो–४०.१, मिनरल–२.४, फाइबर–३.१, कार्वोहाईड्रेड–२६.१, उर्जा–५७६ क्यालोरी, क्याल्मियम ९० मिलिग्राम, फस्फोरस ३५० मिलिग्राम, आइरन–२.५ मिलिग्राम लगायत अन्य विभिन्न प्रकारका तत्वहरु पाइन्छ जसले शरीरलाई मजबुत र रोगसँग लड्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि गर्दछ । तसर्थ चिसो मौसममा बदामको सेवन गर्नुहोस् ।
बिहान बेलुकाको खानामा हरियो सागसब्जी अनिवार्य सेवन गर्नुहोस् । हरियो साग सब्जीले शरीरमा रोगसँग लड्ने क्षमताको बृद्धि गर्दछ । शरीरमा तामक्रम पैदा गर्दछ । तसर्थ चिसो मौसममा मेथी, गाजर, चुकन्दर, पालुङ्गो, लसुन, बेथुवा जस्ता हरियो साग सब्जीको सेवन गर्नुहोस् यसले पाचनप्रक्रिया पनि सहज तुल्याउँछ ।
चिसोबाट बच्नको लागि र शरीरलाई उर्जाशिल बनाउन तिलबाट बनाईका खानेकुरा र तिलको तेल ले शरीरलाई मालिश गर्नाले चिसोबाट बचाउँछ । तिल र मिश्रको काँडापानीले रुघा खोकी र छातीमा जमेको कफ बाहिर निस्कन्छ । कारण यसमा विभिन्न खालका पोषकतत्व जस्तै प्रोटिन क्याल्सियम, कार्बोहाईड्रेट आदि प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । प्राचीन समयमा शरीरलाई सुन्दर बनाउन पनि यसको प्रयोग गरिन्थ्यो ।